Izindaba - Uyini umehluko we-tomato unamathisele ne-ketchup?
Lapho senza utamatisi ochotshoziwe waba ukunambitheka okunamandla kakhulu nokufana okuqinile, leli fomu laziwa ngokuthi unamathisela utamatisi. Singasebenzisa lokhu unamathisela utamatisi ngokuthanda okuhlukahlukene kanye nezindlela zokupheka ezahlukahlukene. Lokhu kunikeza ukunambitheka kwangempela ngamagumbo, isobho, isitshulu, imbiza yokosa njll.
Izithako ezibalulekile ziketamatisi ketchup okokuqala ngotamatisi bese kuba uviniga, ushukela nezinye izinongo. namuhla, utamatisi ketchup usuyingxenye ebalulekile yetafula lokudla futhi unikeza ukunambitheka okuhle kakhulu ngezinto zokudla okusheshayo njenge-burger, chips kanye ne-pizza.